17 May, 2021 : अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको भन्सार जाँचपास छिटो र छरितो बनाउन निर्देशन
14 May, 2021 : प्रेस नोट - कोभिड-१९ लाई सामना गने बजेट ल्याउछौं : अर्थमन्त्री पौडेल
१ २०७८ जेष्ठ ३ अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको भन्सार जाँचपास छिटो र छरितो बनाउन निर्देशन
२ २०७७ चैत्र २६ Ministry of Finance launches the Development Cooperation Report (DCR), 2020
३ २०७७ चैत्र ६ नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच सम्झौता
४ २०७७ माघ २७ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
५ २०७७ माघ २१ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आ.व. २०७७/७८ का लागि सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
६ २०७७ माघ १४ रुपन्देही जिल्लाको तिनाउ नदी पुल र दानव नदी पुलको समुद्घाटन गर्नुहुँदै माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ।
७ २०७७ माघ १३ ६९औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ।
८ २०७७ माघ १३ नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुहुँदै माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ।
९ २०७७ माघ १२ सरकारद्वारा घोषणा गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापनाबारे छलफल । कञ्चनपुरको दैजी छेला, बाँकेको नौबास्ता, रुपन्देहीको मोतिपुर, चितवनको शक्तिखोर, मकवानपुरको मयुरधाप र झापाको दमकमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि तयारी कार्य अघि बढाइने ।
१० २०७७ माघ ११ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा । पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ ।
११ २०७७ माघ ७ प्रस्तावित एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटि कार्यक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कार्यकारी निर्देशक र मिसन प्रमुखसँग मिटिङ । नेपालमा हालै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक सुधार कार्यक्रमको निरन्तरतामा नकारात्मक प्रभाव नपार्ने माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ ।
१२ २०७७ माघ ७ नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयमा छलफल । आयात र निर्यातलाई भन्सारसँग आवद्ध गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न आगामी सातादेखि लागू गर्न सुरु गरिने ।
१३ २०७७ माघ ७ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट , कृषि तथा पशुपंछि विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र सचिवहरु सहित अर्थ मन्त्रालयमा बैठक ।नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि तयारी सम्बन्धी गृहकार्य सुरु ।
१४ २०७७ माघ ७ कृषि विकास बैंकको ५४औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ।
१५ २०७७ माघ ६ पर्यटन र होटल व्यवसायका प्रतिनिधिहरुसहित छलफल। कोभिड-१९ का कारण अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ।
१६ २०७७ माघ ४ माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बैठक ।कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ।
१७ २०७७ पुस २९ नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलद्वारा माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष सुझावहरु पेश । ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा ऋणमा २० करोड रुपैयाँको सीमा बढाउनुपर्ने लगायतका आग्रह ।
१८ २०७७ पुस २९ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा आ.व. २०७६/७७ को लेखा तथा वित्तिय विवरणको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी ।
१९ २०७७ पुस २७ माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालको २८औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन । सहकारी आन्दोलनलाई थप उचाईमा पुर्याउन आग्रह ।
२० २०७७ पुस २६ माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षसँग स्थानीय तहको बजेटबारे छलफल । स्थानीय तहहरुमा पूँजीगत खर्च बढाउने वातावरण तयार पार्न आग्रह ।